Addunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa dha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Addunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa dha
Addunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa dha
Akka gabaasni barruu Forbes ifa godhetti qabeenyaan gareen ispoortii gosa kamiiyyuu addunyaa tana irratti Riyaal Maadriid hindursu. Riyaal Maadriid ol’aantumma qabeenyaa garee ispoortii hundarratti (kubbaa miilaa hanga kubbaa saaphanaatti) kan mirkaneeffate. Gareen kuni qabeenya biliyoona $3.26 horachuudhaan kan irree tujjaarumaa isaa hundatti mul’ise.
Tarree qabeenyaan kan Riyaal Maadriiditti aananii hiriiran garee Dalaas Mavriks ($ 3.2 bl 2ffaa) fi New York Yankees ($3.2bl 3ffaa) dha. Gareen kubbaa miilaa Baarseloonaa ($3.16 bl) fi Manchastar Yunaayitid ($ 3.1 bl) wolduraa duubaan 4ffaa fi 5ffaa dha.
Gareen kubbaa miilaa dheerina qabeenyaan yoo hiriiran Riyaal Maadriid, Baarseloonaa, Manchastar Yunaayitid, Baayer Muniik fi Manchastar Siitiin sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa qabatu. Kilaboonni Ingiliizii bebbeekamoon Cheelsiifi Arsenaal wolitti aananii sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa irra jiru.
Akka sadarkaa kilboota ispoortii woliigalaatti Baayer Muniik 11ffaa, Man Siitii 30ffaa, Cheelsiin 31ffaa fi Arsenaal 36ffaa irra kan jiran.
Previous articleXayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye
Next articleBaankiin Investimentii Awurooppaa (EIB) damee isaa Finfinnetti banate